Home TOROHEVITRA FOTOTRA EUROPEAN Mpilalao Football Football Rodrigo Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny rakitsoratra feno momba ny sariitatry ny baolina kitra iray izay malaza amin'ny anaram-bosotra "Rodri". Ny tantaran-tantarantsika Rodrigo Hernandez momba ny tantaram-pahaterahana sy ny tantaram-pirazanana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-nitranga mahatalanjona avy amin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany.
Rodrigo Hernandez tantara an-tsehatra - ny fanadihadiana. Mankasitraka an'i El Desmarqua, ho an'i Activo sy Marca.
Ny fanadihadihana dia ny fiainany teo aloha, ny fiainam-pianakaviana, ny tantaram-piainana talohan'ny laza, ny fiantsoana ny tantara, ny fifandraisana, ny fomba fiainany ary ny fiainany manokana sns.
Eny, samy mahafantatra avokoa izy rehetra fa basy atletika, boaty ho an'ny mpilalao baolina kitra izay hita ho mpandimby an'i Sergio Busquets. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny tantaram-pitiavan'i Rodrigo Hernandez izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, aleo atomboka.
Rodrigo Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Manomboka ny anarana feno azy; Rodrigo Hernandez Cascante. Rodri, izay fantatry ny ankamaroany na antsoina, dia solonanarana fotsiny. Fantatrao ve… Ny anarana hoe "Hernandez" dia anarana nomena ny fianakavian-drainy, raha ny anarana hoe "Cascante" dia an'ny fianakavian-dreniny.
Araka ny fomban'ny Espaniola, i Rodrigo dia mitondra ny anarana: Rodrigo Hernandez Cascante. Teraka tamin'ny andro 22 tamin'ny 1996 June tao Madrid, Espagne. Ho an'ny fianakaviany, Rodri dia teratany madio ao Madrileno. Midika ara-bakiteny hoe teratany na monina ao Madrid izy.
Niroborobo toy ny ankizilahy kely tao Madrid, tanàn-dehiben'ny baolina kitra any Madrid, dia ara-dalàna raha i Rodri no ho tia ny lalao mahafinaritra. Izy dia anisan'ireny ankizy madinika ireny izay namolavola zavatra tao anaty baolina baolina kitra ary nibata azy isan'andro. Ny fanomezana baolina fanombohana dia ny zavatra tian'ny ray aman-dreniny ho azy. Na izany aza, dia tonga tamin'ny fanomezan-toky izany by Rodri tsy manohintohina ny fianarany amin'ny fiofanana baolina kitra.
Rodrigo Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana - Fanabeazana sy fanabeazana
Nobeazina tao an-drenivohitr'i Espaina i Rodri, tao amin'ny trano fianarana iray. Nampianatra tsy tapaka ny maha-zava-dehibe ny fanabeazana izy hatramin'ny mbola kely, ny fahatsapana izay nanaraka azy hatrany am-boalohany na dia nitaky vola be aza tamin'ny baolina kitra.
"Nanome ahy ny maha-zava-dehibe ny fampianarana ny ray aman-dreniko hatramin'ny naha zazalahy kely ahy,"
Navoakan'i Rodri tao amin'ny tafatafa iray tao Marca izay nisy ny bokiny teo an-tanany havia sy baolina baolina iray teo amin'ny ankavanana.
Rodrigo Hernandez- Football sy manam-pahaizana manokana. Credit to marca.
Ny fandehanana any am-pianarana dia nanolotra tanora Rodri ho fahafahana hilalao baolina amin'ny lalao fifaninanana mandritra ny fanatanjahan-tena. Taorian'ny fotoam-pianarana, nandany fotoana malalaka izy teo amin'ny saha baolina kitra tao an-tanànany izay nikarakara sy nampianatra azy, hetsika iray izay nahafaly ny ray aman-dreniny ary nanosika azy ireo handray andraikitra.
Indraindray dia mazava ho an'ny ray aman-drenin'i Rodri fa ny fampiasam-bola azy ho an'ny baolina kitra. Ny fitiavana toy izany dia nandoavam-bola tanteraka araka ny nambaran'i Rodri antsoina hoe Atletico Madrid ho fitsapana.
Rodrigo Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Ny fientanan'i Rodri ho an'ny baolina kitra dia nahita azy tamin'ny taona 2006 (tamin'ny taonan'ny 10) nandalo fitsapana tamin'ny loko manidina ary nisoratra anarana tamin'ny klioba teo an-toerana, Rayo Majadahonda izay nanome azy ny sehatra handaminana ny asany.
Rodri dia nanatevin-daharana ny fananganana tanora tamin'ny fotoana mitovy amin'izany Lucas (ny ekipany Atletico Madrid) sy ny rahalahiny, Theo Hernández. Tonga dia haingam-pandeha ho an'i Rodri sy ny Hernandez mirahalahy mba hanam-bintana amin'ny klioba. Izy ireo dia samy niara-niara-niasa tamin'ny olon-kafa 10 hafa nanampy ny kliobany hahazoana ny ligy.
Roa taona monja tao amin'ny klioba, tamin'ny faha-iraika ambin'ny folo, Rodri niaraka tamin'ireo Hernandez mirahalahy indray dia nahita indray ny fitsaràna iray hafa ary niditra tao amin'ny departemantan'ny tanora tao Madrid. Ity ambany ity ny sarin'ny Rodri faly ao amin'ny lobaka Atletico.
Rodrigo Hernandez's early years with Atletico Madrid. Credit to ForActivo
Ireo telo ireo dia tafaraka hatrany am-piandohana ary nahazoana ny anaram-bosotra "ny fianakaviana".
Matokia, dieny izao Lucas ary i Theo dia nankahery tao amin'ny klioba, ny fivoaran'i Rodri dia nijanona na dia nomeny ny tsara indrindra aza.
Rodrigo Hernandez Tantaram-pahaizana momba ny asa tany Madrid tamin'ny Atletico Madrid. Credits to SideHumo.
Ny fiampangan'ny fitantanana ny klioba dia ny fahalemeny loatra. Ity olana mahomby ity dia tsy nitsaha-nitarika an'i Julian Munoz, lehiben'ny akademia tamin'izany fotoana izany, mba handefa an'i Rodri ho any amin'ny morontsiraka atsinanan'i Espaina, izay nanatevin-daharana ny tanora FC Villarreal.
Rodrigo Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana - Road to Fame Story
MANJAKA NY PAINTY:
Tamin'ny voalohany, tsy mora ho an'i Rodri ny niala tao amin'ny club izay nanonofy fahombiazany. Nahatsiaro ny ray aman-dreniny sy ny fianakaviany manontolo ny tsy fitandremana azy.
Fantatrao ve? ... Tamin'ny fotoana niatombohany dia i Rodri mihitsy no tsy fohy sy malemy loatra. Izy dia teo amin'ny 1.84 metatra ny halavany saingy mety tamin'izany fotoana izany, tsy nanana hery ara-batana izy.
Rodri tsy nanary an'i Atletico Madrid mihitsy, ilay klioba nananany nanohana azy. Ny nofinofiny amin'ny filalaovana ao amin'ny klioba espaniola dia tsy nanam-bozaka toy ny ravina tao amin'ny masoandro na nokasihina toy ny orona.
Tsy ela dia navaly ny vavaka nataony. Rodri dia nitombo tamin'ny metron 1.91 ary tamin'ny fomba mahagaga, nitombo ara-batana sy ara-teknika koa izy tamin'ny fanimbana ny ekipa voalohany tao Villarreal tao anatin'ny roa taona nijanonana niaraka tamin'ny klioba.
Rodrigo Hernandez làlana mankany amin'ny tantara. Credit to marca.
Ny taona 2015 dia fony i Rodri nanomboka nanao anarana ho azy. Tamin'ity taona ity, nanampy ny Espaniola azy izy tamin'ny fandresena ny UEFA Eoropeana Under-19 Championship.
Rodri dia isan'ny mpilalao Espaniola enina tao amin'ny ekipan'ny Tournoi, anisan'izany ilay nandresy Golden Golden tamin'ny fifaninanana Asensio.
I Rodrigo Hernandez dia mandresy amin'ny fiadiana ny amboara Eropeana ambanin'ny 19 UEFA. Credit any DailyMail.
Nanjary porofon'ny fitombon'i Rodri ny fifaninanana satria izy no nantsoina ny fananana hôpitaly sy zaridaina indrindra amin'ny teny espaniola. Fantatrao ve?… Ny fahaiza-manaon'i Rodri teo amin'ny baolina dia nahatonga azy ho anisan'ny tanora tanora mahafinaritra izay hita ho toy ny PERFECT KID eo am-pototry ny faritra afovoany. Raha tao Villarreal, Rodri dia lehilahy sy mpilalao baolina kitra.
Rodrigo Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana - Mitsangàna amin'ny tantara
Nahita an'i Rodri lasa fananam-pirenena faran'izay henjana sy tanora indrindra i Atletico Madrid nanenina noho ny hadisoana tamin'ny fanosehana azy teo aloha. Ny klioba dia nametraka fomba iray hangatahana famelan-keloka, iray izay tonga tamin'ny alalan'ny fangatahana iray mba hanànany ny jirony maty nody any amin'ny kliobany nofinofiny. Raha ny marina dia ny 24 May 2018, Rodri, ny academy Atletico Madrid dia nody tany amin'ny klioba taorian'ny nahazoana fifanarahana tamin'i Villarreal noho ny famindrany.
Rodrigo Hernandez dia niverina tany Atletico Madrid. Credit to Euro Fantasy League.
Ny fiverenana any an-drenivohitra dia niteraka fanantenana maro ho an'ny tanora Spaniard. Nasehon'i Rodri ny toerany tao amin'ny kliobany taloha, tamin'ny fampisehoana ny sangan'asany sy ny teknikany amin'ny lalao maromaro. Ity ambany ity ny sombin'ny lahatsary. Credit to Tralex.
Niaritra toetr'andro i Rodri. Tamin'ny herintaona monja dia efa nanokan-tena ho an-trano izy. Niharihary izany tamin'ny fotoana nanampiany ny ekipany hamita ny Cup Super UEFA.
Rodrigo Hernandez Mitsangatsangana ho Story. Credit to tandra amin'ny hoditrao-arelife.
Rodri dia mbola lasa mpilalao afaka afaka milalao amin'ny tongotra roa, izay nahita ny tenany manokana ho lasa nanavotra ny baolina avy amin'ny faritra mavesatra. Ity ambany ity ny sombin'ny lahatsary.
Ity fanatanjahantena ity dia nahasarika kliobakelaka ambony tao Eoropa, anisan'izany ny Pep GuardiolaMan City. Taorian'ny nanaporofoany be dia be, nanapa-kevitra i Rodri tao amin'ny varavarankely 2018 / 2019 handefasana ny hahalalan'i Atletico Madrid ny fanapaha-keviny handao ny klioba.
Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, dia misy tsaho momba ny fifandraisana azo atao Pep Guardiola izay maniry ny hanolo ny fahanterana Fernandinho. Ny ambiny, araka ny nolazain'ireo mpankafy baolina kitra, dia tantara izao.
Rodrigo Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana - Relationship Life
Miaraka amin'ny fisondrotany amin'ny lazany, nanjary ny fanontaniana momba ny molotra tsirairay:
"Iza ny sipany na ny vadiny?"
"Manambady ve i Rodri?"
"Manana namana ve i Rodri?"
Rodrigo Hernandez. Vola amin'ny BDFutbol
Tsy misy mandà ny fisehony amin'ny akanjo tsara tarehy miaraka amin'ny tongotra 6 sy ny haavony 3 dia tsy hanome azy ho voaloboka virjiny amin'ny vehivavy.
Na izany aza, ny marina dia tokony holazaina. Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, misy romana miafina, iray izay tsy afaka mandinika ny mason'ny vahoaka fotsiny satria ny fiainan'i Rodri amin'ny sakaizany tsy fantatra dia tsy miankina ary mety tsy misy tantara an-tserasera.
Rodrigo Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana - Ny fiainan'ny tena manokana
Ny fahazoana mahafantatra ny fiainan'i Rodri manokana dia hanampy anao hahazo sary feno momba ny toetrany.
Rodrigo Hernandez Personal Life-Credit ho an'ny YouTube
Hatramin'izao, Rodri dia olona iray izay nampiseho mazava hatrany fa ny fiainany dia tsy momba ny football ihany. Na dia mpilalao baolina matanjaka be aza i Rodri, te-hiaina fiainana tahaka ny olona rehetra i Rodri. Raha ny marina, ny teny hoe Life Personal Rodrigo Hernandez dia voafintina amin'ny teny iray ary izany dia; "Laoniny".
Izay rehetra miara-mitsangatsangana aminy dia hahatsapa fa Rodri dia olona tsotra, ny iray izay tena manetry tena amin'ny fananganana trano tsara sy ny tongony eo amin'ny tany foana.
Lavidavitra ny baoliny sy ny fianarany, mandany ny fotoanany amin'ny lalao tennis i Rodri, manasa ny akanjony, mijery televiziona ary tena manan-danja, manao ny haniny.
Rodrigo Hernandez Fiainam-pianakaviana - Ny zavatra ataony ao an-trano. Credit to marca.
Tsy nanadino ny fianarany izy, dia nanatevin-daharana ny Universidad de Castellon, oniversite iray any Madrid, i Rodri izay nianatra momba ny Business Studies and Economics.
Rodrigo Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana - LifeStyle Facts
Raha ny filazan'ny TransferMarket, Rodri dia manana lanjan'ny vidin'ny € 80,00 Million izay midika fa mpilalao baolina an-tapitrisany izy. Izany zava-misy izany dia mitarika fanadihadiana mpankafy ny fomba fiainan'i Rodri
Manomboka eo, ny lanjan'ny tsenan'ny Rodri dia tsy mihoatra ny fomba fiaina mahavariana satria tena mahira-tsaina amin'ny fitantanana ny vola. Rodri dia tsy mandany toy ny adala na miaina lamaody. Rodri tsy manosotra ny vola amin'ny fiara mirehitra. Ny fiarany, hatramin'ny vao haingana, dia an'i Opel Corsa fanindroany izay novidiny tamin'ny vehivavy iray tamin'ny fotoana nahazoany ny fahazoan-dàlany.
Rodrigo Hernandez Car- Ny Opel Corsa. Bola ho an'ny ekipa BHP
Fantatrao ve?… Na dia nahazo vola be dia be tao LaLiga aza ny olona, ​​dia taitra ny olona nahita an'i Rodri nanohy nijanona tao amin'ny tranon'ny oniversite tao Madrid.
Rodrigo Hernandez any Madrid. Credit to marca.
Ity ambany ity ny sarin'i Rodri ao amin'ny trano fandraisam-bahiny ao amin'ny Oniversite na dia mpanohana an'i Atletico Madrid aza ny klioba fahatelo indrindra amin'ny LaLiga.
Rodrigo Hernandez Fiainana LifeStyle. Credit to marca.
Fantatrao ve?… Rodri ny Tena zava-dehibe koa ny maso. Raha mitady vola ny mpikaroka hafa, dia mijery ny mpanjifany izy. Azo antoka i Rodri fa tsy hanova ny fomba fiainany manetry tena. Izy dia mbola mitovy sy ho eo foana ho an'ny namany.
Rodrigo Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Ny fanoloran-tenan'i Rodri hahazoana antoka fa mahavelom-bolo ny ray aman-dreniny ary miala amin'ny fampahalalam-baovao dia mitovy amin'ny fanoloran-tenany amin'ny ambaratonga. Ny hany fotoana nanolorany ny fianakaviany dia tamin'ny famelabelarany tamin'ny Atlético izay fotoana lehibe ho azy.
Nandritra ny famelabelarany, dia nitondra ny namany 40 sy ny fianakaviany niaraka taminy i Rodri izay nahita azy nanangana ny tendany Atlético. Araka ny fijerin'ny mpanatrika, ny renibeny dia nandresy tamin'ny fotoana iray tamin'ny fampisehoana ny fihetseham-po indrindra tamin'io andro io noho ny fanatanterahana ny nofin'ny zafikeliny.
Na dia nankafy ny lazany aza ny fianakaviany dia sahiran-tsaina ny zavatra iray. Avelao hilazalaza anao izay zavatra nitranga taloha.
Ny raim-pianakavian'i Rodri, anisan'izany ny ray aman-dreniny, indray mandeha dia nanoro hevitra azy tsy hividy handimby an'i Opel Corsa fa fiara tsara kokoa ho an'ny fiarovana azy mandritra ny diany miala an'i Madrid ka hatrany Castellon. Fantatrao ve?… Rodrison Superstar nandà, nilaza fa tsy azony ny antony handany vola be amin'ny fiara.
"Raha ny marina, indray mandeha dia nilaza tamiko izy fa 'adala' ny namana sasany satria nividy fiara tsara tarehy, fa ny zava-dehibe rehetra dia ny fiara iray dia tokony hitondra anao any A hatramin'ny B, izany avokoa."
Ny loharanom-baovao iray dia nilaza indray mandeha.
Rodrigo Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana - Zavatra hafa
Rodrigo Hernandez tatitra tsy fantatra. Bola amin'ny Daily Mail sy Pinterest.
Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana, Rodrigo Hernandez dia tsy nanamafy ny toerany tao Espaina nanomboka iraika ambin'ny folo. Izany dia satria Sergio Busquets, Saul Níguez ary Thiago Alcântara dia mbola eo an-tampon'ny heriny. Fotoana vetivety fotsiny izany alohan'ny handehanany.
Rodrigo Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana - Video Summary
Azafady azafady etsy ambany, ny lahatsary Youtube momba an'ity profil ity. -katsaram-panahy Tsidiho, Aby ho antsika Youtube Channel ary tsindrio ny Ikopa Bell noho ny fampahafantarana.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Rodrigo Hernandez momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Pedro Rodriguez Tantaram-pahaizana momba ny tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra